Da'da barafka yar: waa maxay, goorta ay dhacday iyo sababaha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 30/03/2021 10:49 | Kala bixid
Inteena ugu badan ayaa aqoon u leh da'da barafka caadiga ah ee ka dhacday dhulkeenna. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaan ka hadli doonnaa waxyaabaha ku saabsan da'da barafka yar. Maahan dhacdo caalami ah laakiin waa xilli glaciation hooseeyo oo lagu calaamadeeyay ballaarinta baraf xilligan casriga ah. Waxay dhacday intii u dhexeysay qarniyadii 13aad iyo 19aad, gaar ahaan Faransiiska. Iyagu waa mid ka mid ah waddamada dhibaatada ugu badan ka soo gaadhay hoos u dhaca heer kulka noocan ah. Cimiladan qabow waxay keentay cawaaqib xumo qaarkood waxayna sababtay in bini aadamka la qabsado xaaladaha cusub ee deegaanka.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato da'da yar ee barafka iyo muhiimadda ay lahayd.
1 Da 'baraf yar
2 Daraasado ku saabsan Da 'yar oo Baraf ah
4 Muddooyinka da'da barafka
Waa xilli cimilo qabow oo ka dhacday Yurub iyo Waqooyiga Ameerika sannadka 1300 ilaa 1850. Waxay u dhigantaa xilli heerkulku wuxuu ahaa dhowr ugu yaraan celceliska celceliskiisuna wuu ka hooseeyay sidii caadiga ahayd. Yurub dhacdadan waxaa weheliyay dalagyo, macaluul iyo masiibooyin dabiici ah. Kaliya maahan inay sababto roobab kordhay oo qaab baraf ah, laakiin sidoo kale waxay yareysay tirada dalagyada. Waa in lagu xisaabtamo in tikniyoolajiyadda ka jirta deegaankan aysan maanta la mid ahayn. Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa qalab badan oo kale oo aan awood ugu yeelan karno yareynta xaaladaha taban ee naloo soo bandhigo xaaladahaan cimilada.
Bilowga saxda ah ee da'da barafka yar waa mid aan caddayn. Way adag tahay in la ogaado goorta cimiladu run ahaantii bilaabeyso inay isbedesho oo ay saameyn ku yeelato. Waxaan ka hadleynaa cimilada oo ah isku soo aruurinta dhammaan xogta la helay waqti ka dib gobol. Tusaale ahaan, haddii aan soo ururinno dhammaan doorsoomayaasha sidoo kale sida heerkulka, qadarka shucaaca qoraxda, nidaamka dabaysha, iwm. Waqtigana waan ku dareynaa, cimilo ayaan yeelan doonnaa. Sifooyinkaasi sanadba sanadka ka dambeeya way is bedbeddelaan oo had iyo jeer ma xasilloon. Markaan nidhaahno cimilo waa nooc cayiman, sababta oo ah inta badan waxay u dhigantaa qiyamka doorsoomayaasha ku habboon noocan.
Si kastaba ha ahaatee, heerkulku had iyo jeer ma xasilloon oo sannad walba way kala duwan yihiin. Sidaa darteed, way adag tahay in si wanaagsan loo ogaado markii ay ahayd bilowgii da'da yar ee barafka. Marka la eego dhibaatada ay leedahay in la qiyaaso dhacdooyinkan qabow, xadka da'da yar ee barafka ayaa ku kala duwan daraasadaha laga heli karo.
Daraasado ku saabsan Da 'yar oo Baraf ah
Daraasado ay sameeyeen sheybaarka Glaciology iyo Geophysics ee deegaanka jaamacada Grenoble iyo sheybaarka Glaciology iyo Geophysics ee deegaanka kuliyada Federal Polytechnic School ee Zurich, waxay soo jeedinayaan in fidinta barafka ay sabab u tahay koror weyn oo roob, hoos u dhac weyn oo heerkulka ah.
Sannadahaan, horusocodka barafku badanaa waxaa ugu wacan kororka ku yimid in ka badan 25% ee barafka da'a xilliga qabow. Xilliga jiilaalka waa wax caadi ah inay jiraan roobab qaab baraf ah oo meelo badan ka jira. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, roobabkan roobabku waxay bilaabeen inay sii kordhaan illaa heer ay ka jireen gobollo aan horay baraf uga dhicin.
Tan iyo dhammaadkii Da 'yar oo Baraf ah, dib u gurashadii barafku waxay ahayd ku dhowaad joogto ah. Dhammaan barafleyda ayaa lumiyey qiyaastii seddex meelood meel wadarta muggooda iskucelceliskoodna dhumucdiisuna waa 30 sentimitir sanadkiiba muddadan.
Aan aragno waa maxay sababaha suurtagalka ah ee da'da barafka yar. Ma jiro wax la isku raacsan yahay oo cilmi ah oo ku saabsan taariikhaha iyo sababaha asal ahaan ka dhalan kara xilligan barafka. Sababaha ugu waaweyn waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay qadar yar oo shucaaca qorraxda ah oo ku dhaca dhulka dushiisa. Dhacdadan yar ee falaadhaha qorraxda waxay sababtaa qaboojinta dusha oo dhan iyo isbeddel ku yimaadda jawiga jawiga Sidan oo kale, roobab qaab baraf ah ayaa soo noqnoqda.
Qaar kale waxay sharxayaan in ifafaalaha da'da yar ee barafka ay ugu wacan tahay fulkaanaha oo qarxiyay jawiga waxyar. Xaaladahan waxaan ka hadlaynaa wax la mid ah kuwa kor ku xusan laakiin leh sabab kale. Maaha in qaddarka yar ee shucaaca qoraxda uu si toos ah uga yimaado qorraxda, laakiin waa mugdiga jawiga ee keena hoos u dhaca shucaaca qoraxda ee saameeya dusha sare ee dhulka. Qaar ka mid ah saynisyahannada difaacaya aragtidan ayaa xaqiijinaya in sannadihii u dhexeeyay sannadihii 1275 iyo 1300, oo ahayd markii uu barafka yar bilaabay, 4 fulkaano qarxis ah muddo konton sano ah ayaa mas'uul ka noqon doonta dhacdadan maadaama dhammaantood ay dhaceen waqtigaas.
Siigada fulkaanaha ayaa ka tarjumeysa shucaaca qoraxda qaab waara waxayna yareyneysaa guud ahaan kuleylka laga helo dhulka dushiisa. Xarunta Qaranka Mareykanka ee Cilmi-baarista Hawada (NCAR) ayaa soo saartay qaab cimilo ah si loo tijaabiyo saameynta fulkaanaha soo noqnoqda, muddo konton sano ah. Saamaynta isugeynta ee qaraxyadan fulkaanaha ah ee cimilada ayaa oggolaanaya dhammaan saameynta qarxa folkaanaha soo noqnoqda. Dhamaan saameyntan isugeyntu waxay dhalan doontaa Da 'yar oo Baraf ah. Qaboojiyaha, ballaadhinta barafka badda, isbeddelka wareegga biyaha, iyo hoos u dhaca kulaylka loo raaco xeebta Atlantik ayaa u badan xaalado ku saabsan Da'da Yar ee Da 'yar.
Muddooyinka da'da barafka
Si kastaba ha noqotee, waa in la tixgeliyaa in xoogga da'da barafka yar uusan la barbardhigi karin xilliyada kale ee dheer iyo kuwa adag ee dhulkeennu ku soo qaatay heerka glaciation. Sababaha keena cimilada cimilada si fiican looma garanayo laakiin dhacdadan ka dib markii ay soo baxeen nooleyaal badan. Tan macnaheedu waxa weeye in heer horumar ah, da'da barafka ka dhacay dhulkeenna 750 milyan oo sano ka hor ay noqon karto mid togan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto da'da yar ee barafka iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Da 'baraf yar